Xoghayaha Warfaafinta Waddani USA Oo Ka Warramay Boqolkii Maalmood Ee Guddoomiye Maxamed Aadan Tarabbi Xilka Hayey Wixii Qabsoomay. - somalilandlivemedia
Xoghayaha Warfaafinta Waddani USA Oo Ka Warramay Boqolkii Maalmood Ee Guddoomiye Maxamed Aadan Tarabbi Xilka Hayey Wixii Qabsoomay.
21:11 8. June 2017
Xisbiga waddani USA waa xisbigii ugu horeeyey ee qurbaha laga furay xiliigii ururada la’ahaa. Waxa aasaaskiisa iyo taabbogalintiisa gacanta ku soo haysay Marwo Muna Cali Fidhin oo sida runtii ah ku soo sintay xili iyo xaalad laga la wareegi karayo. Muddaas dheer waxa soo qabsoomay wax fara badan oo illaa maanta raadkiisii muuqdo ama la taaban karo. Maxamed Aadan Tarabbi waa Guddoomiyihii labaad ee majaraha u qabtay Waddani USA waxaanuu xilka hayaa muddo ku dhoow saddex bilood bal haddaba waxaan qiimayn kooban ku saarayaa saddexdaas bilood waxa qabsoomay iyo baaqday.
Nidaamka iyo Odoroska
Kor u qaadista fikirka
Habaynta nidaamka dhaqaale
Kor u qaadista tayada masuuliyiinta
Guddoomiyaha cusub waxa uu xoogga saaray dhismaha iyo dhammaystirka xisbiga waxa uu baddalay qaabkii xisbigu u dhignaa oo ahaa: Gudoomiye ku xigeen iyo Guddi fulineed oo ay ku jiraan 8-Guddoomiye gobol.
Guddoomiye Maxamed Aadan Tarabbi isaga oo ka faa’idaysanaya waayo aragnimda uu ka dhaxlay dhismahaa hore oo uu ka mid ahaa fikir ahaan iyo hawl ahaanbaa xubnihii dhidibada u taagay. Waxa uu qaatay nidaam kale oo u dhigan:
Hoggaan ka kooban 11 xubnood
Guddi Fulineed oo ka kooban 29 xubnood
Iyo Gole dhexe oo jamaahiirta xibiga loo furay
Waxa uu dhisay:
Waaxda dhaqaalaha oo ka kooban 7-xubood
Waaxda wacyigalinta iyo diiwaangalinta muraaqibiinta
Waaxda samafalka USA
Waxa kale oo uu si nidaamsan u dhisay:
Waxa markii ugu horraysay USA lagu qabanayaa shirweynihii ugu horreeyey ee garabka Haweenka 7-15-2017. Taas oo ah curin iyo hal abuur cusub.
Waxa muddadaas kooban uu magacaabay saddex Guddi oo kala ah:
Guddida Qiimaynta Gobollada iyo Xidhiidhka Hoggaanka
Guddida Farsamada Shirweynaha Haweenka oo ka caawin doonta Guddidada qabanqaabada wixii farsamo ah.
Waxa kale oo uu magacaabay Gududdida ka talo bixinta caqabadaha xisbiga markii la magacaabay.
Qurux ahaan iyo nidaam ahaan waxa uu hagaajiyey haykalkii guud ee xisbiga waxa uu gacanta mariyey khilaafyo soo jiray muddo dheer iyo xubno ku ka la aragti duwanaa nidaamka xisbiga oo uu ku walaaleeyey gogosha waddani taas oo ka dhigaysa taariikhda markii ugu horreysay inuu dhammaado khilaafkii xibiga ee soo jireenka ahaa.
Waxa xusid mudan in Guddoomiye Maxamed Aadan Tarabbi aan caalo loo lisin ee lagala hortagay buuq iyo sawaxan iyadoo la isku dayey in xisbiga halkiisa lagu joojiyo hakadna la galiyo hawlaha xisbiga. Marxaladdaas adag waxa uu kaga soo gud bay laba arrimood 1. Go’aan qaadasho iyo wada tashi uu Guddoomiye Tarabbi saax u yahay dhaqanna u ah. 2. Hoggaanka sare ee xibiga oo u muujiyey kalsooni iyo ixtiraam fara badan. Tanaasul uu ka sameeyey waxyaalaha qaar isaga oo isticmaalay diblamaasiyad aad u tayo sarraysa. 3. Jamhuurka xisbiga oo taageero aan caadi ahayn u haya taas oo u quus goysay kooxihii xibiga lugta kaga marnaa ee sida aboorka u cunayey waxtarka xisbiga.
Waxa Guddoomiye Maxamed Aadan Tarabbi safar ku tagay Gobolka Colorado isagoo ka soo furay xafiis cusub markii ugu horraysay isla markaana soo dhisay guddidii Gobolka. Waxa iyana safar ku tagay Minnisota oo uu dardargalin iyo dooddo badan oo xisbiga ku saabsan kaga qayb galay tiraba laba jeer isagoo ku soo dhaweeyey Xoghaya Arrimaha Dibadda Waddani Dr Fadal.
Waxa uu safar taariikhiya ku tagay Colombia oo uu la soo kulmay ganacsato iyo iyo qoonyahan ku nool isagoo ka codsaday inay diyaariyaan dhaqaale iyo muraaqibiin xisbiga u adeega doorashada ka hor. Waxa iyana uu safar ku tagay Chicago oo uu kula kulmay Guddooiyexigeenkiisa Jamaal Daahir Shirdoon iyo guddida Chicago oo ah sida runtii ah guddi nidaam ahaan iyo xisbi ahaanba u diyaarsan isagoo Guddoomiye Jamaal shahaado sharar ku siiyey kuna maamuusay habdhaqankaas wanaagsan ee uu ka hirgaliyey Chigaco.
Celcelis ahaan muddo saddex bilooda waxa uu hawlaha xisbiga u baxay 6-jeer taasi waxay ka markhaati tahay sida uu galiyey tamar badan arrimaha xisbiga.
Inta badan Maxamed aadan Tarabbi waxa uu ku doodaa in xibiga kor loo qaado tayo ahaan isagoo ul ajeeda in Hoggaanka sare iyo ka gobolladu mid waliba waajibkiisa ka soo baxo. Tusaale iminka waxa lagu jiraa xilii Ramadaan ah oo shirarkii xisbigu hakad galeen. Haddana waxa socda hadh habeen shirar aan ka la joogsi lahayn. Waxa socota shirkii gudida qiimaynta gobollada oo habeen walba guddoomiye gobol la shira. Waxa socda shirarkii guddiyada farsamo iyo qaban qaabo ee shirweynaha haweenka, waxa socda shirrarkii guddiyada dhaqaalaha taas macnaheedu waxa weeye in xisbigu nidaam ahaan taabbo galay. Waxa jira xubno ku cusub shaqada ama aan fahansanayn nidaamka shaqo amaba ay ka tahay ku xumee iyo cagajiid Guddoomiye Maxame Aadan Tarabbi waxa uu si ilbaxnimo ku jirto ugu sheegaa hawlaha horyaalla isagoo dhinaca kalana dhaqdhaqaaqooda ugubiya Guddida Anshaxa si ay waajibkooda uga gutaan.
Muddadaas uu xilka hayey waxa uu xidhiidhkooda iyo xidhiidhka xubnaha xisbiga si toos ah shirar ugu qabtay. Xoghaya Guud ee Xisbiga Waddani Maxamed Cabdillaahi Uurcadde oo khadka teleefanka ku soo xidhay si daah furan. Sidoo kale waxa uu Teleconfrence ku soo xidhay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Dr Fadal, waxa isagana uu khadka ku soo xidhay Xoghayaha Maaliyadda. Halka uu Guddoomiyaha Garabka Haweenkana ku xidhay Garabka haweenka ee USA.
Waxa xusid mudan inuu dajiyey xilli hore miisaaniyaddii WADDANI ka rabay Maraykanka oo uu xilli hore ka dalbaday in la keeno si guddida dhaqaaluhu ugu qaybiso gobollada arrinkaas oo si wacan loo qaybiyey hawsheediina la wado.
Waxa uu ku tamaniyayaa Guddoomiye Tarabbi in USA shanboqol oo kun oo doolar laga diro 500 oo muraaqibiin ahina ka baxaan. Shaqadan fulinteeda waxa laga rabaa guddomiyeyaasha gobollada oo taariikhda ku gali doona samaan iyo xumaan middii ka kasbadaan xisbiga waddani USA.
Ugu danbayn waxa WADDANI USA hagaya ruug caddaa siyaasi ah oo bartay culuumta sharciga isla markaana in ka badan 15-sanno ku soo ururada bulshada saaxiibna la ah dadka reer Soomaalilaan oo ka soo jeeda qoys la yaqaan oo magac iyo karaamo ku leh bulshadeena. Maxamed Aadan Tarabbi ilaahay ha ku guuleeyo Waddanina ha guulaysto.
Xoghaya Warfaafinta Waddani USA
Hogaanka Xisbiga Waddani
Newer PostHeavy Losses Reported as Somali Puntland Forces Repel Al-Shabab Attack
Older Post Musharax Cirro Oo Gurigooda Ku Bookhday Qoyskii Iyo Caruurtii Uu Ka Tegay Mujaahid Marxuum Maxamed Biixi Caalin “Ooto”